Jubbaland oo shaacisay Doorashada 13 Kursi oo ka mida Golaha Shacabka (Akhriso Liiska) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Jubbaland oo shaacisay Doorashada 13 Kursi oo ka mida Golaha Shacabka (Akhriso Liiska) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jubbaland oo shaacisay Doorashada 13 Kursi oo ka mida Golaha Shacabka (Akhriso Liiska)
Guddiga Doorashooyinka Jubaland ayaa shaaciyay liiska 13 kursi oo Doorashadooda ka dhaceyso magaalada Kismaayo.
Qoraal uu soo saaray Guddiga SEIT ee Jubbaland Guddiga ayaa lagu sheegay in jadwalka kala horreynta doorashada kuraastan ay dib ka soo sheegi doonaan.
HOOS KA AKHRISO QORAALKA GUDDIGA
“Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Dawlad Goboleed SEIT Jubaland oo fulinaya waajibaadka qaran iyo Heshiisyadii Madasha Qaranka wuxuu halkan kusoo gudbinayaa qabashada Doorashada 13 Kursi oo ka mid ah 43-da kursi ee ku asteysan Dawladda Jubaland”
1- HOP 023
2- HOP 029
3- HOP 072
4 HOP 079
5- HOP 092
6- HOP 112
7- HOP 124
8- HOP 127
9. HOP 130
10- HOP 132
11- HOP 133
12- HOP 136
“Waxaan dib kasoo sheegi doonaa jadwalka kala horeynta kursaasta kor ku xusan”
Dr. Siyaad Maxamed Mursal
Guddoomiyaha Guddiga SEIT Jubaland
Previous articleMuxuu yahay Kursiga lagu eedeeyay inuu Ra’iisal Wasaare Rooble kala wareegay Beeshii lahayd..?
Next articleRW Rooble oo booqday dhaawaca Afhayeenka Xukuuumadda (Sawirro Muuqaalka Macalimuu)